BaşakşehirÇamနှင့် Sakura မြို့ဆေးရုံကြီးဖွင့်လှစ် | RayHaber | raillynews
[22 / 05 / 2020] တူရကီရဲ့အပြာရောင် Bayraklı ကမ်းခြေအရေအတွက်တိုးများလာ! ကမ္ဘာပေါ်မှာ 3	အထွေထွေ
[22 / 05 / 2020] အများပြည်သူ့အလုပ်သမားများအတွက်အပိုဆုကြေးများကိုယနေ့အပိုကြေးပေးမည်	06 တူရကီ
[22 / 05 / 2020] ၄ တူရကီမတိုင်မှီကန့်သတ်ချက်ရှိသောငြိမ်းချမ်းရေးယုံကြည်မှုလျှောက်လွှာတင်ပြီးသည်	အထွေထွေ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်BaşakşehirÇamနှင့် Sakura City ဆေးရုံတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
BaşakşehirÇamနှင့် Sakura City ဆေးရုံတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
21 / 05 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, နောက်ဆုံးမိနစ်, တူရကီ
basaksehir cam နှင့် Sakura မြို့ဆေးရုံဖွင့်လှစ်
အခမ်းအနားမတိုင်မီသမ္မတအာဒိုဂန်သည်BaşakşehirÇamနှင့် Sakura City ဆေးရုံတို့တွင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ဒေါက်တာအာဒိုဂန်မှအာဏာပိုင်များထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း Fahrettin Koca သည်အခြားစိတ်ဝင်စားသူများနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်အာဒိုဂန်က ၀ န်ကြီးချုပ် Shinzo Abe နှင့်အတူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဆေးရုံသည်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးလှပသောအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသောပုံစံအသစ်နှင့်ဘက်စုံရှုထောင့်တူရကီ - ဂျပန်ချစ်ကြည်ရေးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးရုံအမည်အားBaşakşehirÇamနှင့် Sakura City ဆေးရုံအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ တည်နေရာများ၊ အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုဂုဏ်ယူသည့်အထင်ကရအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်လာမည့်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ”
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမရှိသောဆေးရုံသည်အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Erdogan ကပြောကြားသည်မှာ Kovid-456 ဖြစ်ပွားမှုကိုအထူးသဖြင့်ကုတင် ၂,၀၀၀ ၆၂၂ ခု၊ အထူးသဖြင့် ၄၅၆ ခု၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသရေးဌာန၊ ဆေးရုံခန်း ၇၂၀၊ ပြောတယ်
သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanကဌာနခွဲ ၁၀၇ ခုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်ဆေးရုံ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အ ၀ ရောက်ရှိချိန်တွင်နေ့စဉ်လူနာ ၃၅၀၀၀ ကိုကုသရန်နှင့်အသွင်အပြင်ခွဲစိတ်မှု ၅၀၀ ကိုပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ရဟတ်ယာဉ်အစီး ၃ စီးနဲ့ကား ၈ စီး ၁၃၄ စီးအတွက်ကားရပ်နားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆေးရုံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြား guests ည့်သည်များအားအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်နှင့်ငါတို့နိုင်ငံနှင့်နီးကပ်စွာတည်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်သည်နိုင်ငံတကာကျန်းမာရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
“ ၈၂ နိုင်ငံကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့မျက်နှာဖုံးတွေပို့ပေးခဲ့တယ်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်တွင်တူရကီနိုင်ငံသည်မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အပြင်အသက်ရှင်နေထိုင်သောညီရင်းအစ်ကိုများနှင့်ဖော်ရွေသောနိုင်ငံများရှိဆေးဝါးအထောက်အပံ့များပြတ်လပ်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါတို့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေဟာတူညီတဲ့အယူအဆနဲ့အတူကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တစ်ခုလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဆက်လက်စုဆောင်းသွားမှာပါ။ ”
ဂျပန် ၀ န်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့သည့်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားရာတွင် "ဒီဆေးရုံကိုဂျပန်နိုင်ငံ၏သင်္ကေတဖြစ်သောဆာဟာရအမည်ရှိသည့်၎င်းင်း၏ကျန်းမာရေးနှင့်စွမ်းအင်ကိုထိန်ချန်ထားသည့်ထင်းရှူးပင်ပင်နှင့်အတူကျန်းမာခြင်းနှင့်သာယာဝပြောမှုတို့ကိုအမြဲတမ်းတည်ရှိစေမှာပါ။ "
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီး Fahrettin ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်အခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်လူတိုင်း၏ကျန်းမာရေးအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ လိုအပ်သူများအတွက်အချိန်နှင့်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတူရကီအနေဖြင့်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လက်လှမ်းမီကြောင်းအလွယ်တကူပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဒီဆေးရုံဟာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆေးရုံတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဤကျန်းမာရေးဌာနသည်ဆေးရုံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲဆေးရုံ ၈ ရုံပါ ၀ င်သည့်ဆေးရုံများမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်ဟုကိုကိုကိုကပြောကြားခဲ့သည်။ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုကုတင် ၄၂၆ ခုတွင်ကုတင် ၂,၆၈၂ ခုရှိသည်။ လူနာစစ်ဆေးမှုအခန်း ၇၂၅ ခန်းရှိသည်။ ၎င်းတွင်လည်ပတ်ခန်း ၉၀ ရှိပြီး ၃ ခုလုံးသည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပြီးစပ်စပ်ထားသည်။ အခန်း ၂၈ ခန်း၊ အိပ်ယာ ၁၆ ခုပါ ၀ င်သည်။ ဤဆေးရုံသည်တစ်နေ့လျှင်လူနာ ၃၅၀၀၀ ကိုကူညီနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဤအဆောက်အအုံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးငလျင်တိုင်းထွာသည့်အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး ၂,၈၀၀ ငလျင်တိုင်းတာကိရိယာများရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ငလျင်အပါအ ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအနှောင့်အယှက်မရှိဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ”
တူရကီ ၁၈ နှစ်၊ ၈၇,၀၀၀ ၅၁၂ ခုတင်သည်
လွန်ခဲ့သော ၁၈ နှစ်တာကာလအတွင်းသမ္မတအာဒိုဂန်၏အဆောက်အအုံများနှင့်တူရကီနိုင်ငံ၏ဆေးရုံအဆောက်အအုံ ၆၃၆ ခု၊ ဝန်ကြီးများခင်ပွန်းကိုလွှဲပြောင်းပေးသည့်ကုတင် ၈၇,၀၀၀ ၅၁၂ နှင့်အညီသမ္မတအာဒိုဂန်၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အထောက်အပံ့များသည် ၃,၀၀၀ ၃၄၅ ဦး ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်မြို့ဆေးရုံကြီး ၁၀ ခုစတင်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ Başakşehirဆေးရုံနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၁၁ ယောက်မြောက်ဆေးရုံကိုတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ ၆ မြို့ဆေးရုံတွေကိုဆက်ပြီးတည်ဆောက်နေတယ်။ ”
၀ န်ကြီးချုပ်များသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်မြို့တော်ဆေးရုံတွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာလမ်းလျှောက်နေသည့်ဆေးရုံ၌သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုသတို့သမီးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အဆုံးမှတ်အဖြစ်ယူနိုင်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
တူရကီနိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးကဏ္ quality သည်ကျန်းမာရေးပညာရေး၏အရေးပါသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ရန်တိကျသောလမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၀ န်ကြီး၏ဆောင်ရွက်မှုသည်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။
“ စီးတီးဆေးရုံတွေကငါတို့တိုင်းပြည်ကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့အလားအလာကိုဖွင့်ပေးဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဦး ဆောင်နေသောတိုင်းပြည်တိုင်းနီးပါးထက်အခြေခံအဆောက်အအုံများပိုကောင်းလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏မြို့ဆေးရုံများသည်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်တောင့်သက်သာရှိမှုတို့ဖြင့် ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်းတွင်နောက်ဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ဒီအဆောက်အ ဦး အတွင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကြလိမ့်မည်ငါတို့အရည်အသွေးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ။ ၂၁ ရာစုကမ္ဘာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည်နေ့စဉ်တူရကီအမည်ကိုကျန်းမာရေးတိုင်းပြည်အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ "
şBB Ex-Administration မှတားဆီးထားသောBaşakşehirမြို့ဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းများ
ချယ်ရီBaşakşehirBaşakşehir Metro အပိုင်းနွေဦးအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် 2012
Eskisehir Tramway လိုင်းအတွက်စီးတီးဆေးရုံ၏အခြေခံAtıldı
Başakşehirİkitelliမြို့ဆေးရုံ၏လမ်းများကိုမေလ ၂၀ ရက်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်
စီးတီးဆေးရုံကင်ပိန်းမှ Mersin, စီးတီးဘတ်စ်ကားစတင်
အဆိုပါစီးတီးစင်တာတွင်ချိတ်ဆက်ထားခံရဖို့စနစ်နှင့်အတူ Kayseri စီးတီးဆေးရုံမီးရထား
သူကဗေလ-စီးတီးဆေးရုံရထား Protocol ကိုစနစ်လိုင်းမှတူရကီအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Aktas 2019 အတွက် Bursaray စီးတီးဆေးရုံရဲ့ပန်းတိုင်လိုင်း
Bilkent စီးတီးဆေးရုံအသစ် Path ကိုဖွင့်လှစ်
မနက်ဖြန်Kiptaş Silivri ၏တတိယအဆင့်လူမှုအိမ်ရာထီထိုးပုံ
Gebze Darıca Metro ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည်
Covid-19 ၏သက်ရောက်မှုကို Istanbul Traffic အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေး
အစ္စတန်ဘူလ်တွင် ၄ ရက်ကြာကျင်းပသည့်ပွဲတော်ကန့်သတ်ချက်သည် Metro နှင့် Metrobus လေ့လာရေးခရီးများ
ASELSAN ၏ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ထားသော Talent Project ကို NATO လေ့ကျင့်ခန်းတွင်အသုံးပြုသည်
Izmir Metropolitan မှအသက် ၆၀ ကျော်နိုင်ငံသားများအတွက်ပွဲတော်ဆု
မီးရထားစက်မှုလုပ်ငန်းပြပွဲ 2-4 ဇွန် 2020
2: ဇွန်လ 10 00 @ - 4: ဇွန်လ 17 30 @
Trabzon Beşikdüzüမြူနီစီပယ်ကောင်စီ ၀ င်ÖnderÖztürkကကေဘယ်လ်ကားကုမ္ပဏီသည်Beşikdüzüရှိစာချုပ်ကိုဆန့်ကျင်။ ပြုမူသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Öztürkအောက်ပါမှတ်ချက်ချ; “ Beşikdüzüကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီ [ပို ... ]
Pierre Loti Hill မှရွှေချိုအမြင်များသည်လူတိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသည်
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်စဉ်၏ခရီးသည်နှင့်အူစတန်ဘူလ်ယာဉ်အသွားအလာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်စစ်တမ်းတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ စံနှုန်းအသစ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်ခရီးသည်များ၏အပြုအမူအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်လည်းဒီလေ့လာမှုကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်။ [ပို ... ]
Ku-Band လေကြောင်းဂြိုဟ်တုသည်တူရကီတပ်မတော်လေယာဉ်၏ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရင်းမြစ်ရှာဖွေရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
MSB ၏ဖော်ပြချက် ဆင့်ခေါ်စာနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို e-Government မှမေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင်ကြေငြာမည်
Kenan Çalışkan, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ - Sen၊ TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာ Kamuran Yazıcıကိုသူ၏ရုံးခန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ပြီးခေါင်းစဉ်နှင့်ရာထူးပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအင်တာဗျူးများထပ်မံတောင်းခံခဲ့သည်။ [ပို ... ]
သုံးရွက် Clover Kayseri မြို့ဆေးရုံအတွက်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာရာရစေဖို့
Manisa စီးတီးဆေးရုံ Way ကို frenetic လုပ်ငန်း
Bursa စီးတီးဆေးရုံပို့ဆောင်ရေးမှ3နယူးဘတ်စ်ကားလိုင်း
Bursa စီးတီးဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖို့ Masada ကွဲပြားခြားနားရှိပါတယ် 3
အဆိုပါ Bursa စီးတီးဆေးရုံကြီးများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေ့လာမှု Continues
ခရီးသွားခွင့်ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ e-Government မှတစ်ဆင့်ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ရရှိထားပါသလား။
Marmaray Expedition Times နှင့် Marmaray မြေပုံ ၂၀၂၀ ကိုပြင်ဆင်